नेपाल र भारतबीचको फाइनल खेल आज - भारतलाई हराउन कति सहज ? - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on October 16, 2021 by Basanta Pariyar
काठमाडौं : नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलका लागि शनिबार (आज) मैदान उत्रदैछ। माल्दिभ्सको मालेस्थित राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा राति ८:४५ बजे भारतविरुद्ध नेपाल मैदान उत्रन लागेको हो।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगादेशका गोलकिपरले रातो कार्ड खानु नेपालका लागि ‘शुभ’ रह्यो। सुरुवातमै एक गोल खाएको नेपालले थुप्रै गोल गर्ने अवसर पाएपनि गोल फर्काउन नसकिरहेको बेला गोलकिपरले रातो कार्ड खाएपछि बंगलादेशलाई ‘ब्याड लक’ भयो ! त्यसपछि नेपालले अन्तिम समयमा पेनाल्टी पायो। जसकारण नेपालले १–१ को बराबरी नतिजा निकाल्दै नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्यो। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे पारसले